एभिन्युज टेलिभिजनप्रोटोकल नमिल्दा बम्किइन् अनुराधा, शुम्भजित आत्थु आत्थु भए - एभिन्युज टेलिभिजन
एसइई परीक्षाको तयारी पूरा, ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
सिरिया आईएस मुक्त भएको गठबन्धन सेनाको दाबी
विद्युतीय गडबडीका कारण आगलागीका घट्ना बढ्दो, माघमा मात्रै ६१ स्थानमा आगलागी
राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा झण्डोत्तलन कार्यक्रम
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सकेन : सभापति देउवा
जीपको ठक्करबाट दाङमा एक जनाको मृत्यु
मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको गैरकानुनी शुल्कमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै संलग्नता
हर्कबहादुर भण्डारीको हत्यामा संलग्न दुई जना पक्राउ
आईपीएल आजबाट सुरु हुँदै
सरकार एक वर्षको अवधिमा पूर्ण असफल : नेता पौडेल
गृह पृष्‍ठ / मनोरन्जन खबर
प्रोटोकल नमिल्दा बम्किइन् अनुराधा, शुम्भजित आत्थु आत्थु भए
24 Ashwin 2075 Wednesday 11:14 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : गत सोमबार होटल सोल्टीमा भएको सांगीतिक कार्यक्रममा अतिथीहरु प्रोटोकल मिलाउन नजान्दा संगीतकार शम्भूजित बास्कोटाले हैरानी खेप्न पर्यो । बाँस्कोटाको साँगीतिक यात्रामा ५० औँ स्वर्णउत्सवको अवसर पारेर होटल सोल्टीमा भएको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रमुख अतिथि बनाइएकोबारे ३ नं. प्रदेश प्रमुख रहेकी समाजसेवी अनुराधा कोइराला बम्किएकी हुन् ।
यो कुरा कोइरालाले पनि आसनग्रहणको क्रममा मात्रै चाल पाइन्, आफू विशेष वा विशिष्ट नभएर मात्र सामान्य अतिथिका रुपमा बोलाइएको । सरकारले जारी गरेको वरियता सूचीमा प्रदेश प्रमुख सातौँ नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ भने त्यही लहरमा उपप्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ ।
यस्तो आसन ग्रहणलगत्तै अनुराधाले नजिकै रहेका शम्भुजितका सहयोगी तथा वरिष्ठ चलचित्र प्राविधिक नरेन्द्र खड्कालाई बोलाएर भनिन्, ‘मलाई बस्न अलिक अप्ठेरो भयो । कार्यक्रम एकदम राम्रो छ । बस्न मन पनि थियो । तर, प्रोटोकल बिग्रिएर समस्या भयो । अप्ठेरो नमान्नुहोला, मचाहिँ जान्छु है’ यस्तो कुरा सुन्नासाथ नरेन्द्र पसिना–पसिना भए । शम्भुजितलाई खुसुक्क सुनाएको खबर जनआस्था साप्ताहिकले प्रकाशित गरेको छ । ।
यसपछि आत्थु–आत्थु भए शम्भुजित । उनी उठेर ‘दिज्यू–दिज्यू’ भन्दै अनुराधालाई थम्थम्याउन थाले । धेरैबेर अनुराधाले ‘हैन, हैन’ भन्दै थिइन् । शम्भुजितले कमजोरी स्वीकारे । आइन्दा त्यस्तो नहुने कसम पनि खाए । तर, पनि अनुराधाले ‘हैन, मैले नराम्रो केही सोचेको छैन । तपाईंहरुले पनि ख्याल नगरेर हो, नियतवस होइन भन्ने बुझेँ, तर म जान्छु है’ भनिन् । शम्भुजित हात जोडेको जोड्यै थिए । धेरै आग्रहपछि बल्ल उनी आफ्नो प्रदेशमा बस्न राजी भइन् ।
सरकारले पोहोर माघमा सार्वजनिक गरेको वरियताअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सातौँ वरियतामा राखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिपछि यो पदको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । त्यही वरियताक्रममा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर प्रदेशप्रमुख अनुराधालाई आयोजकले बुझाउन नसकेको कुराचाहिँ के हो भने अहिले ईश्वर पोखरेल व्यक्ति नभएर सिंगै देशका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुन् ।
पोखरामा मनाए प्रदीप र जसिताले होली
पोखरा : युवास्टार प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङले पोखरामा होली मनाएका छन् । चलचित्र ‘लभ स्टेशन’को टिम सहित पोखरा ...
‘जात्रै जात्रा’ वैशाख २७ गते रिलिज हुने
गायिका पाठकको जन्मदिनको कोशेली ‘यो केटीले मुस्काएर देशै खाने भई’
विवादास्पद चलचित्र ‘ग्रीन बूक’ ले जित्यो ओस्कार पुरस्कार
यस्तो छ पशुपति शर्माले राजनीतिक दबाबपछि हटाएको गीत (भिडियो)
पशुपति शर्माले ‘लुट्‍न सके लुट कान्छा’ बोलको गीत किन हटाए युट्युवबाट ?
एसइई परीक्षाको तयारी पूरा, ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थी सहभागी ...
9 Chaitra 2075 Saturday 4:56 pm
9 Chaitra 2075 Saturday 4:30 pm
विद्युतीय गडबडीका कारण आगलागीका घट्ना बढ्दो, माघमा मात्रै ६१ स्थानमा ...
9 Chaitra 2075 Saturday 2:43 pm
9 Chaitra 2075 Saturday 2:33 pm
9 Chaitra 2075 Saturday 2:27 pm